David Harbour သည်ထူးဆန်းသောဗီဒီယိုကို Stranger Things Season4set မှ Millie Bobby Brown နှင့်မျှဝေသည် - သူစိမ်းများ
David Harbour သည်ထူးဆန်းသောဗီဒီယိုကို Stranger Things Season4set မှ Millie Bobby Brown နှင့်မျှဝေသည်
Sara ရာသီ ၂ ကိုမည်သူသေဆုံးစေခဲ့သနည်း။ ဘယ်တော့ထွက်လာမှာလဲ Thunder Force သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 9ပြီလ ၉ ရက်၊
Stranger Things Season4set မှ David Harbour နှင့် Millie Bobby Brown ဗီဒီယို
Harbour သည် Instagram ဗွီဒီယိုကိုအတူတကွခေါ်ယူရသည့်အကြောင်းရင်းကိုမသိရသေးပါ။ ပိုမိုရှုပ်ထွေးစေရန်၊ တစ်စုံတစ်ယောက်သည် Harbor သို့မျက်နှာပြင်မှအော်ဟစ်နေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြားရသည်။ ကျနော်တို့စုဆောင်းနိုင်တဲ့အရာကနေသူဟာပရိသတ်တွေနဲ့ဘရောင်းကိုအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတဲ့တစ်နေ့တာကိုပြီးအောင်လုပ်ဖို့ပြန်ခေါ်ခံခဲ့ရတယ်။
ဒေးဗစ်ဆိပ်ကမ်း (@dkharbour) မှမျှဝေသောပို့စ်တစ်ခု
ငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းကိုမသိရပေမယ့်ဆိပ်ကမ်းနှင့်ဘရောင်းအတူတူတွေ့မြင်ရုံကောင်းသောပဲ! အကြောင်းကိုဘာမှမကြည့်ဖို့ကောင်းတယ် သူစိမ်းများ ရာသီ4။
ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဒီကြယ်တွေကိုတောင်ကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရပြီဆိုရင်ခဏကြာပြီ။ ဆိပ်ကမ်းကို Hopper အဖြစ် ၀ တ်ဆင်သည်ကိုအမှန်တကယ်လန်းဆန်းစေသည်။
သူဟာ Hopper ရဲ့ပုံပန်းသဏ္toာန်နဲ့တူညီနေပါတယ် သူစိမ်းများ ရာသီ4လှောင်ပြောင်နောက်တွဲယာဉ် ၂၀၂၀ အစောပိုင်းတွင် Hopper သည်ရုရှားထောင်တွင်အမေရိကန်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
ကျနော်တို့နေဆဲအကြောင်းကိုအများကြီးမသိရပါဘူး သူစိမ်းများ ရာသီ ၄။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဟူးပါအားကယ်တင်ရန်ကြံစည်မှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူပြီးဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်ပရိသတ်များအားယူရီအားခဏတာပြန်လည်မိတ်ဆက်ပေးသည့်ထိုစာသားနှင့်အတူအများဆုံးဖြစ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်အချို့သောကောလာဟလများလည်းရှိပါတယ် သူစိမ်းများ ရာသီ (၄) ကိုမကြာမီဖြိုဖျက်တော့မည်ဖြစ်ပြီး၊ သရုပ်ဆောင်နှင့်သင်္ဘောသားများသည်စတင်ရိုက်ကူးလိမ့်မည် သူစိမ်းများ ရာသီ5။ ဒါကိုအတည်မပြုရသေးပါ ငါသံသယတွေအများကြီးရှိသည် အကြောင်းဖြစ်ပျက်အကြောင်းကို ကူးစက်ရောဂါနှင့်စပ်လျဉ်း။ လူတိုင်းရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများကိုထောက်ရှု။ ၊
ငါတို့သည်သင်တို့အကြောင်းပိုမိုသိစေရန်ပါလိမ့်မယ် သူစိမ်းများ ရာသီဥတု ၄ ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာသောအခါ။ ယခုအဘို့, Harbour နှင့်ဘရောင်းမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအတူတူပျော်မွေ့!
netflix ရာသီ5ရက်နေ့တွင် wentworth
ရာသီ4လွှတ်ပေးသည့်နေ့အတွက်ညှိထားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များကိုရှာဖွေသောအခါသင့်အားကျွန်ုပ်တို့အသိပေးပါမည်။
ငါ conjuring ကြည့်ရှုနိုင်ဘယ်မှာ
wentworth ရာသီ4အခါ netflix အပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်
မှောင်မိုက်ရာသီ2အတွက် max ကို
netflix သြဂုတ် 2016 အပေါ်အကောင်းဆုံး
netflix အပေါ်လူ vs အစားအစာဖြစ်ပါတယ်